Samachar Batika || News from Nepal » मिडियामा अन्तरवार्ता दिइरहेका बेला एक्कासी ढले पुण्य गौतम (भिडियो)
मिडियामा अन्तरवार्ता दिइरहेका बेला एक्कासी ढले पुण्य गौतम (भिडियो)
पोखरा, माघ २४ । सामाजिक अभियन्ता तथा नेकपाका नेता पुण्य गौतम पछिल्लो समय मिडियामा अन्तरवार्ता दिन निकै सक्रिय थिए । हेमा श्रेष्ठ, चितवनका सन्तोष सुनुवार लगायतका पिडितहरुको पक्षमा पछिल्लो समय खुलेर वकालत गर्दै आइरहेका पुण्ड पछिल्लो समय विबादमा समेत तानिदै आएका थिए ।
दर्जन बढी युट्युव च्यालन र केही अनलाइनका पत्रकारहरुसँग आफ्नो कुरा राखिरहेका बेला पुण्ड गौतम बोलीरहेकै समयमा एक्कासी ढल्न पुगेका छन् । उनी मिडियाकर्मीकै अगाडी ढलेपछि उनलाई आकस्मिक रुपमा विर अस्पताल भर्ना गरिएको छ । आखिर के भयो त पुण्यलाई ? भिडीयो हेर्नुहोस :एक युटुव च्यानलाई दिएको अन्तरवार्ता:
यो पनी पढ्जनुहोस थाभावी बोलेको भन्दै बिनय जंग बस्नेतले पुण्य गौतममाथि अन्तर्वार्ताक्रममै गरे हा’तपा’त !
पोखरा । चर्चित समाजसेवी बिनय जंग बस्नेत र अर्का युवा नेता भनेर चिनाउने पुण्य गौतम बीच मिडिया कै सामु हा’तहा’लाहा लको स्थिति बनेको छ । पि’डितको सहायोग रकम पुण्य गौतमले हि’नामिना गरेको विषयलाई लिएर भएको बाद’वि’वादको क्रममा उनीहरु बीच यस्तो घ’टना घ’टेको हो।
पि’डितको लागि उठेको रकम पुरा पि’डितलाइ नदिएको भन्दै बिनय जंग बस्नेतले प्रश्न गरेपछि पुण्य गौतमले पनि बिनय जंग माथि प्रतिप्रश्न गरेका थिए
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७६, शुक्रबार १०:३५